संघर्ष वास्तविक हो । – Shalom Nepal
शालोम नेपाल – के तपाइँले कहिल्यै महसुस गर्नुभएको छ, कि तपाइँ शत्रुसँग लड्दै हुनुहुन्छ जुन तपाईंले देख्न सक्नुहुन्न र बुझ्नुहुन्न? सबै इसाईहरूको लागि, त्यो वास्तविकता हो। हामी स्वर्गीय अनुपातको लडाईमा छौं, र यो संघर्ष वास्तविक छ। शैतान र त्यसका प्रेतहरूले हामीलाई निरुत्साहित गर्न र तिनीहरूको भ्रामक चालहरूबाट अलमल्याउन खोजिरहेका छन् र यदि हामी त्यसका साथमा छैनौं भने त्यसले हामीलाई विचलित र व्याकुल बनाउँछ। तसर्थ तपाईंले यो याद गर्नुहोस कि तपाइँ अदृश्य रुपमा दुश्मनसँग लड्दै हुनुहुन्छ।
हामि आत्मिक संसारमा संघर्ष गरिरहेकाछौ, त्यसैले सदैव अदृश्य सक्ति संग युद्ध गर्न हामी हाम्रो आत्मिक हतियारहरू संग सुसज्जित हुनु आवश्यक छ। जसले यसलाई इन्कार गर्छन् र उनीहरूले देख्न नसक्ने वास्तविकता संग भाग्ने जोखिम मोल्दन्छन्। तिनीहरूले तपाइँसँग दिमागका खेलहरू खेल्छन् र तपाइँको नियन्त्रणमा छ भन्ने धारणा दिन्छन्, र त्यसपछि तिनीहरूले तपाइँलाई थाहै नदिई चिपकाउँछन्। जुन क्रियाकलापबाट कोही पनि यसमा अछुतो रहन सकेकाछैन।
इसाईहरूले बुझ्नु पर्नेकुरा चाहि, हामी त्यसप्रकारको संघर्षमा विजयी हुन सक्छौं। पवित्र आत्माको शक्तिमा भर परेर र परमेश्वरको वचनमा भरोसा राखेर यो प्रकारको संघर्षमा विजयी हुनसक्छौ। जब तपाईं आफ्नो आत्मिक हातहतियार र बाइबललाई तरवारको रूपमा लिएर युद्ध गर्न जानुहुन्छ। यसले तपाईंलाई अपुग महसुस गराउन सक्छ, तर तपाईंले यो याद राख्नुपर्दछ कि परमेश्वरको वचन जीवित र शक्तिशाली छ, हड्डी र हड्डी भित्रको मासी विभाजन गर्न सक्षम छ। यदि तपाईं आफ्नो शक्तिमा भर पर्नुभयो भने, तपाईं असफल हुनुहुनेछ, तर प्रभुमा भरोसा राख्नुहुन्छ भने उहाँले तपाईंलाई विजयी तुल्याउनुहुनेछ।
त्यसैले विजयी जीवन बिताउनु भनेको शैतानलाई हराउनको लागि मात्रै पनि होइन। यो प्रभुको नजिक जाने उत्तम उपाय पनि हो। त्यसैले आफैलाई तयार पार्नुहोस् र सदैव तयार हुनुहोस्।
किनकि हामीहरूको युद्ध शरीर र रगतको विरुद्ध होइन, तर प्रधानताहरूका विरुद्ध, शक्तिहरूका विरुद्ध, वर्तमान अन्‍धकारका सांसारिक शासकहरूका विरुद्ध र स्‍वर्गीय स्‍थानहरूमा भएका दुष्‍ट्याइँका आत्‍मिक सेनाहरूका विरुद्ध हो। एफिसी ६:१२
ख्रीष्टमा तपाइको संघर्ष अरुलाई बताउनुहोस।
Posted on May 29, 2020 May 29, 2020 Author Shalom Nepal
शालोम नेपाल – आज ईसाइहरु धेरै चोटि परमेश्वोरले तपाइको जीवनमा गर्नु भएको कामको घोषणा गर्न सकिरहेको हुदैन । तपाइँलाई यो डर छ कि फलानाले केहि पो भन्ने होकी, कतै जिस्काउने पो हो कि भन्ने प्रकारको डर तपाईमा भएको कारण ख्रीष्टको साचो गवाही सहि ठाउमा दिन सकिरहेको हुदैन ।मानिसहरूको माझमा परमेश्वोरले गर्नु भएको कामको घोषणा गर्न […]
शालोम नेपाल – अहिलेको यो समयमा धेरै मानिसहरूको चित्त दुखिरहेको छ, तसर्थ संघर्ष गर्दै गरेको व्यक्तिहरूलाई मद्दत गर्नकालागि म सबै सँग अनुरोध गर्छु। म चाहेर पनि ती सबैलाई सहयोग गर्न सबै माझ पुग्न सक्दिन । हुनसक्छ यो COVID 19 विश्वाव्यापी माहामारीको अवस्थामा तपाईंले आफ्नो काम छोड्नुभएको छ । यस्तो समयमा, तपाईंले विश्वास गर्नुपर्दछ कि परमेश्वरले […]
येशू ख्रीष्टमा तपाईको विश्वास कस्तो छ ?
Posted on May 27, 2020 May 27, 2020 Author Shalom Nepal
शालोम नेपाल – तपाईले येशू ख्रीष्टमा विश्वास के को निम्ति गरिरहनुभएको छ ? ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्नुको मनोसाए के हो? के कहिले जान्ने कोशिस गर्नुभएको छ ? धेरै जना आजपनि आफुले मुक्तिपाइयो अरु के सोच्नु र भनि ख्रीष्टमा विश्वास गरेपछि तातो न चिसो तर मनतातो भएर बसिरहेको हुन्छौ। तर ख्रीष्टले तपाईलाई उहामा डोर्याउनु भएको तपाईको ईच्छा […]